नारीलाई कमजोर सम्झिनेमाथि रिभेन्जको प्रहार – Maitri News
नारीलाई कमजोर सम्झिनेमाथि रिभेन्जको प्रहार
Smrit August 10, 2021
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र ‘ रिभेन्ज ’ को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । डिएस डिजिटल सिनेमाको ब्यानरमा मोहन गमालको प्रस्तुति रहेको चलचित्र रिभेन्जको टिजर सार्वजनिक भएको हो। जसमा प्रेम र द्धन्द्धलाई मुख्य रुपमा केन्द्रित गरेर निमार्ण गरिएको छ।
अमन कुमार देवको निर्माण र शंकर अधिकारी घायलको लेखन तथा निर्देशन रहेको रिभेन्ज मुविको टिजर ओएस आर डिजिटल बाट रिलिज गरिएको हो। नारीलाई कमजोर सम्झिने माथी प्रहार गरिएको रिभेन्ज प्रदर्शनका लागि तयार भएको निमार्ण पक्षले जनाएको छ ।
कृष्ण पाण्डे को छायांकन देव महर्जनको द्वन्द ,राजन महर्जनको नृत्य सानू हबिकको ड्रोन बिस्वास भण्डारी र अन्जली थापाको सम्पादन रहेको छ। चलचित्रमा रोशन बिसि ,रबिन श्री, रेनु थापा, विशाल अग्रवाल , खगेन्द्र घिमिरे ,गगां कुवर, पदम सुनार र अम्बिका खड्का को अभिनय रहेको छ।
Previous Previous post: न्यातापोल कर्नर टीमको बार्षिक उत्सवमा रक्तदान
Next Next post: ओलीको प्रश्न–एमसीसी के गर्नुहुन्छ ? लिपुलेक, लिम्पियाधूरा, कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन नसकेको ??